High nkenke Ọgwụ akpụzi Nsukka na Suppliers - China High nkenke Ọgwụ akpụzi Factory
Site na ihe ohuru ohuru na teknụzụ ogwu, a na-eji nkenke ogwu eji eme ihe maka ngwa oru ndi ozo ma nwekwaa uru ya maka usoro mmeputa nke di elu nke bukwara ugwo.
Nkenke injection ịkpụzi bụ a mgbagwoju usoro na-achọ ukwuu pụrụ ịdabere na igwe, ọgaranya ahụmahụ na-emepụta na injinia ike na-elu-nkenke akụkụ izute ahịa mkpa, YF akpụzi nka na-eke kachasị aghụghọ na n'ichepụta n'uche na-enyere aka ike ịrụ ọrụ nke ọma na-na-elu ngwọta N'ihe niile nke usoro ndụ nke ngwaahịa.
Yuanfang Technology bụ onye asambodo asambodo ISO nke na-ebuzi nkenke na Shenzhen, China.
Na 1996, aha ya dị ka HanKing Plastic malitere ebu akpụ Ndinam na Ọgwụ na ịkpụzi azụmahịa, Na 2017, izute na-eto eto ahịa ina, anyị melite a ọkachamara nkenke ebu n'ichepụta factory, Yuanfang technology tọrọ ntọala. Anyị na-ada na-elu-nkenke rụpụta nwere elu àgwà nke ngwaahịa na afọ ju ahịa 'ụzọ oge.
Anyị na-enwe nnukwu aha n'etiti ndị ahịa anyị nwere akụkụ plastik TIGHT TOLERANCE na ebu maka ọgwụ na ntụtụ na ụdị ụdị plastik niile, gụnyere MULTI-CAVITY ebu na nzukọ plastic akụkụ, na ụda olu njikwa.
Adịbeghị anya, anyị na-akwalite anyị Fanye akpụzi, Kpochapụ, Kọmputa akpụzi, Medical Device akpụzi, Multi-uji eze akpụzi, 2-Shot akpụzi na anyị bụ ndị ọma na-enwe ahịa anyị 'aha ọma.
Nkenke ọgwụ ebu
Ruo ọtụtụ afọ, nkedo nkedo plastik abụrụla teknụzụ a pụrụ ịdabere na ya nke nwere ike iji rụpụta ngwaahịa ngwaahịa na mmiri dị iche iche. Ọgwụ na ịkpụzi na-egbo mkpa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ezu maka uka mmepụta nke akụkụ dị iche iche, ma n'ihi na ukwuu ọtọ akụkụ, a ọhụrụ technology dị mkpa-nkenke injection ịkpụzi.
The nkenke nke ebu tumadi na-adabere na nkenke nkenke nke ebu oghere size, ezi n'ọnọdu nke oghere ma ọ bụ ma na nkenke nke nkewa n'elu uwa osobo chọrọ. A ghaghị ịchịkwa nkwekorita akụkụ nke ihe nkedo nkenke n'ozuzu n'okpuru 1/3 nke ndidi nke ngwaahịa.
Machinability na rigidity. Na ebu Ọdịdị imewe, ọnụ ọgụgụ nke cavities ekwesịghị ịbụ nke ukwuu, na ala efere, support efere na uji eze mgbidi kwesịrị ịbụ thicker zere oké njọ na-agbanwe deformation nke akụkụ n'okpuru elu okpomọkụ na elu nsogbu.
Maka ezi mbibi, ebu kwesịrị belata ọnụ ọgụgụ nke oghere, belata onye ọsọ, belata onye ọsọ, ma nwee ọkwa dị elu karịa ebu nkịtị. Ihe nke ebu nkenke bu alloy ígwè na ike di elu.
Ihe ndị e ji emepụta oghere na onye na-agba ọsọ ga-enweta ọgwụgwọ ọkụ siri ike, ma họrọ ihe ndị nwere oke ike (akụkụ ndị nwere ike iru HRC52), ezigbo nguzogide akwa na nguzogide nrụrụ siri ike.
Njirimara nke nkenke ogwu:
1. Akụkụ nwere oke nkenke na obere nnabata
2. Ebu dị mma ma sie ike, etu akụkụ ya si dị, ogo gwụchara na etu esi adị n’etiti ndebiri di elu.
3. Jiri nkenke ọgwụ nkenke iji dochie igwe eji arụ ọrụ.
4. ịmụta nkenke injection ịkpụzi usoro.
5. Họrọ nkenke injection ịkpụzi ihe.
Anyị anọwo na-arụpụta ebu ebu na ngwaahịa plastik maka ndị ahịa ama ama na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, injinia ọkụ na elektrọnik. Anyị bụ ndị zuru okè na onye na-emepụta elu-nkenke plastic components. YF akpụzi ga-eso gị rụọ ọrụ ubu iji mejuo mkpa gị.
Akpụzi Factory, Omenala akpụzi, Plastic Fanye Nkedo, Ndị na-emepụta ebu ebu, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts,